Fandalovana eto Madagasikara :: Hitety faritra maro ilay mpihira ny “Jerusalema” • AoRaha
Raikitra fa handalo eto Madagasikara, amin’ny 14 – 22 novambra izao ilay mpanakanto avy atsy Afrika Atsimo, Nomcebo, fantatra amin’ilay hira nalaza tao anatin’ny fihibohana “Jerusalema”. Hiatrika fitetezam-paritra, hanomboka any Sambava handalo an’i Toamasina sy Mahajanga ary hifarana eto Antananarivo, ity mpanakanto vahiny ity, amin’ izao fitsidihany an’i Madagasikara izao, araka ny nambaran’i Bryan, avy ao amin’ny Malagasy MusicEvent mpikarakara hetsika any Eoropa.
Hiara-hisalahy amin’izy ireo amin’izany ny Mick Prod’Zik. « Madagasikara, toy ny firenena maro maneran-tany, ka niatrika ny fihibohana. Sahirana ny saina ary tao anatin’izany no nipoiran’ilay hira Jerusalem. Na ny mpianakavy, na ny mpinamana, eny hatramin-dry bebe sy dadabe ary ireo kilonga aza samy faly, nianatra ary niezaka nandihy an’ilay hira avokoa », hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny fikambanana mikarakara an’ity seho ity nanazava ny anton’ny safidy.
Manana hira maro ity mpanakanto ity, ankoatra an’ilay “Jerusalema”, ka afaka hahazaka sehatra tsara. Na izany aza, hizara sehatra amina mpanakanto malagasy maro izy ka isan’izany ry Black Nadia, Nael, Mad Max, Jerry Marcoss, Tence Mena sy ny maro hafa.
Hanomboka ny seho any Sambava, amin’ny 14 novambra, i Nomcebo. Any Toamasina (15 novambra) sy Mahajanga (21 novambra) kosa ny tohiny. Hiakatra etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe indray izy amin’ny 22 novambra, araka ny fandaharam-potoana nofaritan’ny mpikarakara. Mialoha ny hiampitany eto Madagasikara dia hanolotra seho iray any Burkina Faso ity, mpanakanto Afrikana Tatsimo ity amin’ ny 31 oktobra ho avy izao. Hifindra lasy atsy amin’ny nosy Maorisy kosa ny vehivavy amin’ ny 13 – 14 febroary 2021.
Hetsika karakarain’ny Malagasy MusicEvent hatrany ireo rehetra ireo, araka ny fanazavana.
Misy lalao maro efa miparitaka any anatin’ny tambajotran-tserasera sosialy Facebook hahafahan’ireo mpankafy misitraka fanomezana maro manomboka amin’ny tapakila hijerena ny seho ka hatramin’ny lelavola roa tapitrisa ariary.
Hamehana ara-pahasalamana Horavaina daholo ny fitangoronana sy hetsika manakorontana
Ny ody ratsy sy ody tsara teo amin’ny Malagasy
Fifaninanana haisoratra Mitohy ny fisafidianana amin’ny “La Plume d’or”
Bakalorea :: Hivoaka raha afaka telo herinandro ny voka-panadinana